Onyankopɔn nkurɔfo benya nhyira bebree (1-12)
Yehowa de nsã pa bɛtow pon (6)
Owu nni hɔ bio (8)
25 O Yehowa, wone me Nyankopɔn. Mema wo so, na miyi wo din ayɛ,Efisɛ woayɛ anwonwade pii,+Nneɛma a wobɔɔ wo tirim* wɔ ho fi tete no,+Ayɛ nokware,+ na aba mu. 2 Woama kurow bi adan abo* sum hɔ,Woama kurow dennen adwiriw agu pasapasa, Ahɔho* aban no nyɛ kurow bio;Wɔrensan nsi bio da. 3 Ɛno nti, nnipa a wɔn ho yɛ den bɛhyɛ wo anuonyam;Amanaman atirimɔdenfo kurow besuro wo.+ 4 Efisɛ woabɛyɛ mmɔborɔwafo abannennen,Ohiani abannennen wɔ n’ahohia mu,+Ahum ano guankɔbea,Ne ɔhyew mu onwini.+ Bere a atirimɔdenfo abufuw* te sɛ ahum a ɛpem ɔfasu, 5 Te sɛ sare so ɔhyew no,Wobrɛ ahɔho* dede ase. Sɛnea omununkum nwini gye ɔhyew no,Saa ara na woma atirimɔdenfo dwom ano brɛ ase. 6 Bepɔw yi so+ na asafo Yehowa bɛtow aman nyinaa pon;Ɔde aduan pa,+Ɔde nsã pa,*Ɔde aduan pa a hon fra mu,Ɔde nsã pa a wɔasɔn so. 7 Bepɔw yi so na obeyi* nkataho a ɛkata nnipa nyinaa soNe ntama* a wɔde akata aman nyinaa so no. 8 Ɔbɛmene owu* afebɔɔ,+Na Awurade Tumfo Yehowa bɛpopa obiara anim nisu.+ Obeyi ne man animguase* afi asaase nyinaa so,Efisɛ Yehowa ankasa na waka. 9 Saa da no wɔbɛka sɛ: “Hwɛ! Yɛn Nyankopɔn ni!+ Yɛde yɛn ani ato no so,+Na obegye yɛn.+ Yehowa ni! Yɛde yɛn ani ato no so. Momma yɛn ani nnye, na yenni ne nkwagye mu ahurusi.”+ 10 Efisɛ Yehowa de ne nsa bɛto bepɔw yi so,+Na wobetiatia Moab so wɔ n’ankasa asaase so+Te sɛ nwura bebree a wotiatia so wɔ sumina* so. 11 Na ɔbɛtwe ne nsam wɔ soTe sɛ nea osuguarefo twe ne nsam guare no,Na ɔbɛdannan ne nsa yiyeDe abrɛ n’ahantan ase.+ 12 Na kurow dennen ne w’afasu atenten a ɛbɔ wo ho ban no,Obebubu agu;Obedwiriw agu fam, mfuturu mu.
^ Anaa “Nneɛma a wutuu ho agyina.”
^ Anaa “afabo.”
^ Anaa “bobesa a ada ase.”
^ Anaa “nkataanim.”
^ Anaa “Obeyi owu afi hɔ.”